Asetenam Nsɛm: Mebɔɔ Mmɔden Suasuaa Wɔn a Wɔyɛɛ Nhwɛso Pa | Thomas McLain
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Angolan Sign Language Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Mebɔɔ Mmɔden Suasuaa Wɔn a Wɔyɛɛ Nhwɛso Pa
Thomas McLain anom asɛm
Mibisae sɛ: “Wunim mfe a madi?” Izak Marais a ɔfrɛɛ me fii Patterson, New York no buae sɛ: “Minim paa.” Saa bere no, na mewɔ Colorado. Ma menkyerɛ nea ɛkɔfaa saa nkɔmmɔ yi bae.
WƆWOO me December 10, 1936, wɔ Wichita, Kansas, U.S.A. Me na meyɛ m’awofo mma baanan no mu panyin. Ná me papa din de William, ɛnna me maame din de Jean. Ná wɔmfa Yehowa som nni agorɔ koraa. Ná Paapa yɛ asafo somfo. Saa bere no, saa na na wɔfrɛ onua a odi asafo bi anim. Me maame suaa Bible mu nokware no fii ne maame Emma Wagner hɔ. Me nanabea Emma Wagner boaa nnipa pii ma wohuu nokware no. Wɔn mu baako ne Gertrude Steele. Akyiri yi, Gertrude kɔyɛɛ asɛmpatrɛw adwuma wɔ Puerto Rico mfe pii. * Enti minyaa nnipa pii a wɔyɛɛ nhwɛso pa a na metumi asuasua.
ME WERƐ AMFI NHWƐSO PA A WƆYƐ MAA ME NO
Me papa gyina abɔnten de nsɛmma nhoma rema nkurɔfo a wɔretwam
Memeneda anwummere bi, bere a na madi mfe nnum no, na me ne me papa gyina abɔnten rekyekyɛ Ɔwɛn-Aban ne Consolation (seesei wɔfrɛ no Nyan!) nsɛmma nhoma no ama nkurɔfo a wɔretwam. Saa bere no, na United States de ne ho ahyɛ Wiase Ko II no mu denneennen. Nanso, esiane sɛ Kristofo mfa wɔn ho nhyehyɛ akodi mu nti, Paapa ankɔ ɔko no bi. Bere a yegyina abɔnten hɔ no, oduruyɛfo bi a wabow nsã baa hɔ bɛyeyaw Paapa. Ɔkae sɛ, Paapa yɛ ohufo a ɔmpɛ sɛ ɔko ma ne man. Oduruyɛfo no begyinaa Paapa anim pɛɛ ka kyerɛɛ no sɛ, “Ohufo te sɛ wo! Sɛ woyɛ ɔbarima a, fa wo nsa ka me.” Ná misuro, nanso Paapa yɛɛ biribi a m’ani gyee ho paa. Wammua oduruyɛfo no. Mmom, ɔkɔɔ so kyekyɛɛ nsɛmma nhoma no maa nnipadɔm a na wɔabetwa ahyia hɔ no. Emu hɔ ara na ɔsraani bi betwaam. Na oduruyɛfo no teɛɛm sɛ, “Akoa yi yɛ ohufo. Ka biribi kyerɛ no!” Ɔsraani no hui sɛ ɔbarima no abow, enti ɔka kyerɛɛ no sɛ, “Kɔ fie kɔda ma w’ani so ntetew wo!” Oduruyɛfo no ne ɔsraani no nyinaa fii hɔ kɔe. Sɛ mekae akokoduru a Yehowa maa me papa nyae no a meda Yehowa ase paa. Ná me papa wɔ mmeae mmienu a woyi ti wɔ Wichita, na na oduruyɛfo no ka wɔn a wobeyi wɔn ti wɔ hɔ no ho!
Me ne m’awofo rekɔ ɔmantam nhyiam wɔ Wichita, afe 1940 mfe no mu
Bere a midii mfe nwɔtwe no, m’awofo tɔn wɔn fie ne adan a woyi ti wom no. Wosiesiee ofie ketewa bi a kar tumi twe, na yetu kɔɔ Colorado kɔsomee wɔ baabi a wohia mmoa. Yɛkɔtenaa baabi a ɛbɛn Grand Junction. M’awofo yɛɛ akwampae adwuma wɔ hɔ, na wɔde wɔn bere no bi yɛɛ kua, na na wɔsan yɛn mmoa. Adwumaden a wɔyɛe ne Yehowa mmoa nti, ankyɛ na wɔtee asafo. June 20, 1948 no, Paapa bɔɔ me ne afoforo te sɛ Billie Nichols ne ne yere a na wɔabegye nokware no asu wɔ asubɔnten bi a ɛda mmepɔw mu mu. Akyiri yi, Billie ne ne yere kɔyɛɛ ɔmansin adwuma. Saa ara na ne babarima ne ne yere nso yɛe.
Yɛne nnipa pii a na wɔde nsi reyɛ Ahenni adwuma no bɔe paa, na yɛne wɔn bɔɔ Yehowa som ho nkɔmmɔ a ɛhyɛ nkuran. Wɔn a na yɛtaa ne wɔn bɔ paa ne Steele abusua no. Wɔne Don ne Earlene, Dave ne Julia, ɛnna Si ne Martha. Saa nkurɔfo yi boaa me paa wɔ m’asetena mu. Wɔboaa me ma mihui sɛ, sɛ wode Ahenni no di kan a, wubenya akomatɔyam, na ebesi wo yiye.
MESAN TU KƆƆ BAABI FOFORO
Bere a midii mfe 19 no, onua bi a ɔbɛn yɛn abusua no a wɔfrɛ no Bud Hasty kae sɛ memmɛka ne ho mma yɛnyɛ daa akwampae adwuma wɔ United States anafo fam. Ɔmansin sohwɛfo no kae sɛ yentu nkɔ Ruston, Louisiana. Ná Adansefo pii wɔ hɔ a wɔagyae asɛnkakɔ. Ɔmansin sohwɛfo no ka kyerɛɛ yɛn sɛ, sɛ anuanom ba oo, sɛ wɔamma oo, yɛnyɛ asafo nhyiam no nyinaa nnawɔtwe biara. Yɛhwehwɛɛ baabi a ɛfata a yebetumi ayɛ asafo nhyiam wɔ hɔ, na yesiesiee hɔ kama. Ná yɛyɛ asafo nhyiam no nyinaa. Nanso, yɛn baanu nkutoo yɛɛ asafo nhyiam no kosii bere bi. Sɛ baako kogyina hɔ yɛ dwumadi no fã bi a, na baako atena ase atie ama nsɛmmisa no nyinaa ho mmuae. Sɛ ɔyɛkyerɛ bi wom a, ná yɛn baanu kɔ asɛnka agua no so kɔyɛ bere a obiara nni hɔ a ɔretie yɛn! Bere bi akyi no, onuawa bi a n’ani afi hyɛɛ ase baa asafo nhyiam no bi. Afei yɛn Bible asuafo binom ne anuanom a wɔagyae asɛnkakɔ binom nso baa asafo nhyiam no bi. Ankyɛ koraa na yebenyaa asafo a emu yɛ hyew.
Da bi, me ne Bud hyiaa Church of Christ sɔfo bi. Ɔne yɛn bɔɔ Bible mu nsɛm bi a na minhyiae da ho nkɔmmɔ. Wei haw me kakra, na ɛma midwinnwenee me gyidi ho yiye. Enti mede nnawɔtwe sii pɛ hwehwɛɛ nsɛm a obisae no ho mmuae. Nhwehwɛmu a meyɛe no boaa me paa ma misoo nokware no mu den, na me yam a na anka mahyia ɔsɔfo foforo.
Ankyɛ na ɔmansin sohwɛfo no ka kyerɛɛ me sɛ, mintu nkɔ El Dorado, Arkansas nkɔboa asafo a ɛwɔ hɔ no. Bere a mewɔ hɔ no, na wɔtaa frɛ me ma mekɔ Colorado kohyia abaguafo a wɔde nkurɔfo kɔ sraadi no. Da bi a na merekɔ akohyia abaguafo no, me ne akwampaefo binom a wɔka me ho wɔ me kar mu no konyaa akwanhyia wɔ Texas ma me kar no sɛee koraa. Yɛfrɛɛ onua bi ma ɔbɛfaa yɛn kɔɔ ne fie, na akyiri yi ɔde yɛn kɔɔ asafo nhyiam. Wɔkaa yɛn akwanhyia no ho asɛm kyerɛɛ anuanom, na wɔkekaa wɔn nsa ase maa yɛn sika kakra. Onua no san tɔn me kar no maa me. Ɔde gyee dɔla 25.
Obi faa yɛn tenaa ne kar mu kɔɔ Wichita, na mekɔtoo onua bi a ɔbɛn yɛn abusua no paa wɔ hɔ. Ná wɔfrɛ no E. F. “Doc” McCartney, na na ɔreyɛ akwampae adwuma wɔ hɔ. Ná ne mma ntaafo, Frank ne Francis yɛ me nnamfo paa. Wɔda so ara yɛ me nnamfo paa de besi nnɛ. Ná wɔwɔ kar dedaw bi, na wɔtɔn maa me de gyee dɔla 25. Sika a wogyee me no, ná ɛne sika a minyae bere a wɔtɔn me kar a ɛsɛee no yɛ pɛpɛɛpɛ. Ɛno ne bere a edi kan a mihui paa sɛ, Ahenni no a mede adi kan nti, Yehowa ama me nsa aka nea mihia. McCartney abusua no de ɔbea hoɔfɛfo bi a n’ani kũ Yehowa som ho kyiaa me. Ná wɔfrɛ no Bethel Crane. Ná ne maame din de Ruth. Ná Ruth yɛ ɔkwampaefo a ɔde nsi ayɛ asɛmpaka adwuma no wɔ Wellington, Kansas. Bere a odii mfe 90 ne akyiri mpo no, na ɔda so ara yɛ ɔkwampaefo. Mihyiaa Bethel no, anni afe na mewaree no wɔ afe 1958 mu. Ɔbɛkaa me ho wɔ El Dorado ma yɛyɛɛ akwampae adwuma.
YENYAA HOKWAN BI A ƐMAA YƐN ANI GYEI
Me ne Bethel susuw nhwɛso pa a anuanom yɛ maa yɛn wɔ yɛn mmofraase no ho. Enti yetuu yɛn ho mae sɛ adwuma biara a Yehowa ahyehyɛde no bɛka sɛ yɛnyɛ no, yɛbɛyɛ. Wɔma yɛkɔsomee sɛ akwampaefo atitiriw wɔ Walnut Ridge, Arkansas. Afei wɔ afe 1962 no, yɛn ani gyei sɛ wɔtoo nsa frɛɛ yɛn sɛ yɛnkɔ Gilead Sukuu. Ná ɛno ne adesuakuw a ɛto so 37. Bere a yehui sɛ Don Steele nso ka saa adesuakuw no ho no, yɛn ani gyei paa. Bere a yewiee sukuu no, wɔmaa me ne Bethel kɔsomee wɔ Nairobi, Kenya. Yɛrefi New York no, na supɔw ahini yɛn anaa yɛn ani atetɛw. Nanso, bere a yekoduu Nairobi wimhyɛn gyinabea na anuanom behyiaa yɛn no, supɔw a na ahini yɛn no danee anigye!
Yɛne Mary ne Chris Kanaiya rekɔ asɛnka wɔ Nairobi
Ankyɛ na yɛn ani kaa Kenya. Yɛn ani begyee asɛnka adwuma a na yɛreyɛ wɔ hɔ no ho. Wɔn a yedii kan ne wɔn suaa ade ma wɔbɛsom Yehowa ne Onua Chris Kanaiya ne ne yere Mary. Wɔda so ara reyɛ bere nyinaa som adwuma wɔ Kenya. Afe akyi no, wɔma yɛkɔsomee wɔ Kampala, Uganda. Yɛn na na yɛyɛ asɛmpatrɛwfo a wodi kan kɔkaa asɛmpa no wɔ hɔ. Yɛn ani gyei saa bere no paa, efisɛ na nnipa pii pɛ sɛ wosua Bible mu nokwasɛm no, na wɔn mu pii bɛyɛɛ Adansefo. Nanso, bere a yedii mfe mmiɛnsa ne fã wɔ Afrika no, yɛsan kɔɔ United States kɔkyekyeree yɛn abusua. Ɛda a yɛrefi Afrika no, supɔw a na ahini yɛn no de, na ɛsõ koraa sen bere a na yɛrefi New York no. Ná yɛn ani abɛka Afrika. Enti na yɛhwɛ kwan sɛ, da bi yɛbɛsan aba Afrika.
YENYAA ADWUMA FOFORO
Yɛkɔtenaa Colorado atɔe fam, baabi a na m’awofo te. Ankyɛ na yɛwoo yɛn babea a odi kan, Kimberly. Asram 17 akyi na yɛwoo yɛn babea Stephany. Bere a yɛbɛyɛɛ awofo no, yɛmaa yɛn ani kũũ yɛn asɛyɛde foforo a ɛne mmofra ntetee no ho paa. Enti yɛyɛɛ nea yebetumi biara sɛ yɛde nokware no bedua yɛn mmabea a wɔn ho yɛ fɛ no koma mu. Ná ebinom ayɛ nhwɛso pa ama yɛn, enti na yɛpɛ sɛ yesuasua wɔn. Yehui nso sɛ, nhwɛso pa betumi aboa mmofra paa. Nanso, ɛno nkyerɛ sɛ ɔkwan biara so wɔbɛsom Yehowa. Ná me nuabarima kumaa ne me nuabea baako afi nokware no mu. Mehwɛ kwan sɛ wɔbɛsan asuasua nhwɛso pa a afoforo yɛ maa wɔn wɔ wɔn mmofraase no.
Bere a yɛretete yɛn mmabea no, yɛn ani gyei paa. Yɛbɔɔ mmɔden bere nyinaa sɛ yɛbɛbom ayɛ ade sɛ abusua. Ná baabi a yɛte no bɛn Aspen, Colorado. Enti yesuaa nsukyenee so agorodi, sɛnea ɛbɛyɛ a bere ne bere mu no yɛbɛbom akodi agorɔ wɔ nsukyenee so. Bere a yɛredi agorɔ no, na yɛne yɛn mmabea no rebɔ nkɔmmɔ. Ná yɛtaa kɔbɔ ɔsẽsẽ wɔ baabi, na na yɛbɔ nkɔmmɔ bere a yɛreto ogya no. Ɛwom sɛ na wosusua de, nanso na wɔne yɛn bɔ adwuma a sɛ wonyin a wɔbɛyɛ ho nkɔmmɔ. Saa ara nso na na wɔne yɛn susuw mmarima a sɛ wonyin a wɔn ani begye ho sɛ wɔbɛware wɔn ho. Yɛbɔɔ mmɔden sɛ yɛde Yehowa akwankyerɛ bedua yɛn mmabea no koma ne wɔn adwene mu. Daa na yɛhyɛ wɔn nkuran sɛ wɔmfa bere nyinaa som adwuma no nsi wɔn anim. Yɛboaa wɔn ma wohui sɛ nyansa wom sɛ wɔbɛware obi a ɔno nso wɔ botae koro no ara bi. Yɛsan boaa wɔn ma wohui sɛ, ɛrenyɛ papa sɛ wɔbɛware bere a wonnyinii. Yɛkaa asɛm bi de dii fene sɛ, “Wunnii mfe 23 a, nnwen aware ho.”
Yesuasuaa nea yɛn awofo yɛe no, enti daa na yɛbɔ mmɔden sɛ yɛne yɛn mma no bɛbom akɔ asafo nhyiam ne asɛnka. Ná yɛma wɔn a wɔreyɛ bere nyinaa som adwuma no bi bɛtena yɛn fie. Afei nso, na yɛtaa bɔ bere a na yɛsom sɛ asɛmpatrɛwfo no ho nkɔmmɔ ma yɛn ani gye. Ná yɛhwɛ kwan sɛ, da koro, yɛn baanan no nyinaa betu kwan akɔ Afrika. Ná yɛn mmabea no ani gye ho paa sɛ wɔbɛkɔ hɔ.
Ná yɛyɛ abusua adesua bere nyinaa. Ɛyɛ a na yɛyɛ tebea ahorow a ebetumi asɔre wɔ sukuu mu ho ɔyɛkyerɛ. Ná yɛma yɛn mmabea no yɛ wɔn ho sɛ Ɔdansefo bi a ɔreyi obi nsɛmmisa ano. Wɔn ani gyee saa kwan a na yɛfa so sua ade no ho, na ɛma wonyaa ahotoso nso. Bere a wɔrenyin no, ɛtɔ da na yɛka sɛ wɔmmra mma yɛnyɛ abusua som a, na wɔretwetwe wɔn ho. Da bi mpo de, wɔyɛe araa ma meka kyerɛɛ wɔn sɛ, yɛrenyɛ abusua adesua no bio enti obiara nkɔ ne dan mu. Ɛhaw wɔn paa ma wosui, na wɔkae sɛ wɔpɛ sɛ yɛyɛ abusua adesua no. Ɛno ma yehui sɛ, ɛwom sɛ na wɔyɛ mmofra de, nanso sɛɛ na Yehowa ho nsɛm a yɛde rekyerɛkyerɛ wɔn no redu wɔn komam ankasa. Wɔn ani begyee adesua no ho paa, na na yɛma wɔka nea ɛwɔ wɔn komam. Ɛtɔ da a, ná wɔkeka nsɛm bi a ɛkyerɛ sɛ wonnye Bible nkyerɛkyerɛ no bi nni. Ɛba saa a, na ɛhaw yɛn paa. Nanso, ɛma yehuu nea ɛwɔ wɔn komam ankasa. Afei sɛ yɛne wɔn susuw nsɛm ho a, na wogye Yehowa nkyerɛkyerɛ no tom.
YEGYEE NSAKRAE FOFORO A ƐBAE TOOM
Ankyɛ koraa na yɛn mmabea a yɛretete wɔn no nyinii. Onyankopɔn ahyehyɛde no boaa yɛn, na ɛmaa yɛn akwankyerɛ a yɛde bɛtete yɛn mma no. Enti yɛyɛɛ nea yebetumi biara sɛ yɛbɛboa wɔn ma wɔadɔ Yehowa. Bere a wowiee ntoaso sukuu no, wɔn baanu nyinaa bɛyɛɛ daa akwampaefo, na wosuaa nsaanodwuma a ɛbɛma wɔatumi ahwɛ wɔn ho. Ɛyɛɛ yɛn dɛ paa sɛ wɔyɛɛ saa. Akyiri yi, wɔne anuanom mmea foforo baanu tu kɔɔ Cleveland, Tennessee, kɔsomee wɔ baabi a mmoa ho hia. Yɛn ani gyinaa wɔn paa, nanso bere nyinaa som adwuma a na wɔreyɛ no nti, yɛn koma tɔɔ yɛn yam. Me ne Bethel san fii akwampae adwuma ase, na ɛno ma yenyaa hokwan ahorow maa yɛn ani gyei. Ebi ne sɛ, me ne me yere kɔsom asafo ahorow sɛ ɔmansin sohwɛfo nanmusini. Ná yɛboa ɔmantam nhyiam ho ntotoe nso.
Ansa na yɛn mmabea no retu akɔ Tennessee no, wɔkɔɔ London, England. Bere a wokoduu hɔ no, wɔkɔhwɛɛ baa dwumadibea a ɛwɔ hɔ no. Ɛhɔ na Stephany hyiaa Paul Norton. Ná aberante no yɛ adwuma wɔ Betel. Saa bere no, na Stephany adi mfe 19. Akyiri yi a yɛn mmabea no san kɔɔ London Betel nsrahwɛ no, Kimberly nso hyiaa onua Brian Llewellyn a na ɔne Paul Norton yɛ adwuma wɔ Betel hɔ. Paul ne Stephany waree, nanso Stephany dii mfe 23 ansa na ɔreware. Afe akyi no, Brian ne Kimberly nso waree. Saa bere no, na Kimberly adi mfe 25. Enti anyɛ yiye koraa no, wɔn baanu nyinaa twɛn kosii sɛ wodii mfe 23 ansa na wɔreware. Me ne me yere nyinaa fi yɛn komam penee mmarima a wɔn mu biara kae sɛ ɔbɛware no no so, efisɛ yehui sɛ wɔfata.
Yɛne Paul, Stephany, Kimberly, ne Brian wɔ Malawi baa dwumadibea, afe 2002
Yɛn mmabea no aka akyerɛ yɛn sɛ, nhwɛso a yɛne wɔn nananom yɛe no aboa wɔn ma wɔatumi adi Yesu ahyɛde a ɛne sɛ ‘yɛnkɔ so nhwehwɛ Ahenni no kan’ no so. Wɔyɛɛ saa bere mpo a na wɔn sikasɛm nkɔ yiye. (Mat. 6:33) Wɔtoo nsa frɛɛ Paul ne Stephany ma wɔkɔɔ Gilead Sukuu April 1998. Ná ɛno ne adesuakuw a ɛto so 105. Bere a wowiee sukuu no, wɔde wɔn kɔɔ Malawi wɔ Afrika. Bere koro no ara, wɔtoo nsa frɛɛ Brian ne Kimberly ma wɔkɔyɛɛ adwuma wɔ London Betel, na akyiri yi, wɔma wɔkɔyɛɛ adwuma wɔ Malawi Betel. Yɛn ani gyei mmoroso, efisɛ adwuma pa biara nni hɔ a ɛsen saa a aberante anaa ababaa bi betumi ayɛ.
HOKWAN FOFORO BI A ƐMAA YƐN ANI GYEI
January 2001 na asɛm a mekae mfiase no sii. Onua Marais a ɔhwɛ Kasa Nkyerɛase Dwumadibea no so no ka kyerɛɛ me sɛ, wɔreyɛ ntetee bi ho nhyehyɛe ama wɔn a wɔkyerɛ nsɛm ase wɔ wiase nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛte Borɔfo kasa ase yiye. Ɛwom sɛ na madi mfe 64 de, nanso na wɔpɛ sɛ mibegye ntetee na meka akyerɛkyerɛfo a wɔbɛkɔ akɔtete anuanom no ho. Me ne Bethel bɔɔ asɛm no ho mpae. Afei, yɛne me maame, ne me yere maame a wɔn mfe akɔ anim no kosusuw asɛm no ho de tiee nea wɔn nso bɛka. Ɛwom sɛ, sɛ yɛkɔ a na yɛrentumi mmoa wɔn sɛ kan no de, nanso wɔn baanu nyinaa kae sɛ yɛnkɔ. Enti mefrɛɛ anuanom a wɔwɔ Patterson no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, yɛn ani gye ho paa sɛ yebegye hokwan kɛse a ɛte saa atom.
Emu hɔ ara na wohui sɛ me maame anya kokoram. Enti meka kyerɛɛ me maame sɛ mannya ankɔ, mmom mɛboa me nuabea Linda ma yɛahwɛ no. Nanso, Maame kae sɛ, “Dabi! Nnsan. Sɛ woankɔ a, ɛbɛhaw me paa.” Linda nso kaa asɛm koro no ara. Me ne me yere ani sɔɔ nea Maame ne Linda yɛe no. Anuanom a wɔwɔ baabi a Maame te no nso boae, na yɛn ani sɔɔ nea wɔn nso yɛe no paa! Ɛda a yesiim sɛ yɛrekɔ Ɔwɛn Aban Nteteebea wɔ Patterson no, n’adekyee na Linda frɛ bɔɔ yɛn amanneɛ sɛ Maame awu. Sɛ Maame te ase a, anka ɔbɛhyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnyere yɛn ho nyɛ adwuma foforo a wɔde ahyɛ yɛn nsa no. Enti saa pɛpɛɛpɛ na yɛyɛe.
Bere a wɔka kyerɛɛ yɛn sɛ Malawi baa dwumadibea na yebedi kan akɔ no, yɛn ani gyei paa! Ɛhɔ na na yɛn mmabea no ne wɔn kununom resom. Enti bere a yekoduu hɔ no, pɛ ani bɛhwɛ, anigye nko ara! Ɛno akyi no, yɛkɔɔ Zimbabwe ne Zambia kɔtoaa adekyerɛ no so. Yɛyɛɛ saa ɔkyerɛkyerɛ adwuma no mfe mmiɛnsa ne fã. Afei, wɔma yɛsan kɔɔ Malawi kɔkyerɛw Adansefo a wɔamfa wɔn ho anhyehyɛ amanyɔsɛm mu nti wɔtaa wɔn no suahu ahorow. *
Yɛne yɛn mmanana nam asɛnka mu
Afe 2005, me ne Bethel san fii Malawi kɔɔ yɛn kurom wɔ Basalt, Colorado kɔtoaa daa akwampae adwuma no so. Bere a yɛrefi Malawi no, supɔw hinii yɛn bio. Brian ne Kimberly tu bɛtenaa yɛn mpɔtam hɔ afe 2006. Ɛhɔ na wɔtetee wɔn mmabea baanu, Mackenzie ne Elizabeth. Paul ne Stephany da so wɔ Malawi. Paul som sɛ Baa Boayikuw a ɛwɔ Malawi no muni. Seesei mereyɛ adi mfe 80. Sɛ mihu sɛ mmerante a me ne wɔn boom yɛɛ adwuma no aso asɛyɛde a bere bi na mewɔ no mu a, ɛma m’ani gye paa. Anigye a yɛanya wɔ asetena mu no fi afoforo nhwɛso pa a yesuasuae, na seesei yɛn nso yɛayɛ nhwɛso pa ama yɛn mma ne yɛn mmanana.
^ nky. 5 Wubehu asɛmpatrɛw adwuma a Steele abusua no mufo yɛe ho nsɛm pii wɔ May 1, 1956, Ɔwɛn-Aban, Borɔfo de no kr. 269- 272, ne March 15, 1971, Ɔwɛn-Aban, Borɔfo de no kr. 186-190.
^ nky. 30 Ɛho nhwɛso ne Onua Trophim Nsomba asetenam nsɛm a ɛbaa April 15, 2015, Ɔwɛn-Aban, kr. 14-18 no.